Puntland oo albaada isugu laabtay suuqii iyo Marsadi Kalluunka Bosaso iyo mudaharaadyo ka dhashay-DAAWO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland oo albaada isugu laabtay suuqii iyo Marsadi Kalluunka Bosaso iyo mudaharaadyo ka dhashay-DAAWO
Puntland oo albaada isugu laabtay suuqii iyo Marsadi Kalluunka Bosaso iyo mudaharaadyo ka dhashay-DAAWO
March 5, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Xukuumadda Puntland ayaa maanta gabi ahaanba albaabada isugu laabtay Marsada iyo suuqii Kalluunka ee ku yaalay Dekedda magaalada Boosaaso.
Kadib amaro dhawaan kasoo baxay wasaaradda Gaadiidka Badda iyo Dekedaha Puntland laguna ogeysiiyay laamaha kale ee dowladda aya lagu xirayo goobahan isugu jiray suuq lagu iibiyo kalluunka iyo Marsad ay kusoo xirtaan saxiimadaha kalluumeysiga.
Fulinta amarkan lagu xirayo marsadda iyo Suuqa kalluunnka Boosaaso ayaa ay xukuumadda Puntland ku macneysay nadaafad xumo iyo amni darro keentay in albaadada la isugu laabo goobahan.
Xiritaanka Marsadda iyo Suuqa kalluunka ee Boosaaso waxaa ka dhashay mudaharaadyo lagu dalbanayo in dib loogu furo suuqyadan la xiray maadaama gabi ahaan la xiray oo aanay ku shaqeysan karin.
Banaanbaxa looga soo horjeedo xiritaanka suuqa Kalluunka
Qaar badan oo kamid ah dadka ku ganacsan jiray suuqa kalluumeysi ee la xiray ayaa HM u sheegay in ay isku dayeen in ay saaka gaaraan goobihii ay ku ganacsan jireen waxaana ay sheegeen in loo diiday gelidda suuqa laguna wargeliyay in aanay dib dambe ugu soo laaban.
Waxa ay sheegeen in ay isku dayeen in ay tagaan wasaaradaha ku shaqada leh arimahan iyo weliba xiritaanka suuqa hase ahaatee loo diiday in ay galaan oo ay wax jawaab ahi ka waayeen masuuliyiinta dowladda.
Masuuliyiinta dowlada sida madaxweynaha Puntland ayay ugu baaqeen in uu il naxariis ah ku eego xaaladooda oo ay dib u laasho xukuumadda uu hogaamiyo go’aanka lagu xiray suuqan la xiray maadama ay noloshood ku tirsneyd ka ganacsiga kalluunka iyo goobaha la xiray intaba.